February 2014 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
ကိုင်းဒီနေ့တော့ Four inaRow Game.apk ဒီဂိမ်းကလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကလေးလူကြီးဆော့လို့ရပါတယ် ဦးနှောက်ကလေးသုံးပြီးတော့ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းလေးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာလေးဗျာ အပိုထပ်ပြီးတော့ပြောတော့ဘူး လိုအပ်ရင် ဒေါင်းသွားလိုက်ကြဗျာ...
ဗဟုသုတအနေနဲ့ဒီနေ့ ဖေးစ်ဘုတ်မှာ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ Hein Kyaw Swar တင်ပေးထားတဲ့ Video File လေးပါ ကြည့်ကြည့်ပါ ဗဟုသုတ-ပညာရတာပေါ့.
ပထမဆုံး Japan IP ရဖို့ ကြိုက်တဲ့ VPN သုံးပါ ကျွန်တော် Tunnel Bear နဲ့လုပ်ပြထားတယ်
ဒါက PC နဲ့ဖြည်တာပါ Ph နဲ့ဆိုလည်းရပါတယ် ဒါပေမဲ့ PC နဲ့ ကပိုအဆင်ပြေတယ် Tunnel Bear အကောင့် ရဖို့ ဖုန်းမှာ Tunnel Bear အရင်ထည့် ပြီးရင် တစ်ခြား VPN တစ်ခုသုံးပြီး အကောင့် ရအောင်လုပ်ပါ ရတာနဲ့ PC က Tunnel Bear မှာ ဖြည့်ပြီး Japan ပြောင်းပေးပါ ပြီးရင် Video တိုင်းပဲဆက်လုပ်ပါ www. မဟုတ်ဖူး m. နော် Mobile View မှရတယ် အဲ့တာမလုပ်ခင်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Browser အကုန်ပိတ်ပြီး Cleaner နဲ့ Analyze လုပ်ပြီး Run Cleaner လုပ်ပေးပါ အဲ့မှာကံကောင်းချင်ရင် Security ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ Video ကလိုတန်းပေါ်မယ်မပေါ်ရင်လည်း Mobile Mail ဖြည့်တဲ့အကွက်မှာကြိုက်တာလျှောက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက် ခဏနေ အဲ့လိုမျိုး ဖုန်းဖြည့်တဲ့အကွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ် ထည့်ရမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ Pinger ပေါ့ Pinger က Miss Call တစ်ခုအရင်လာမယ် ပြီးရင် Voice Mail လာမယ် နားထောင်လိုက် အားလုံး ၄ လုံးပြောလိမ့်မယ် အဆင်ပြေကြပါစေ (www.facebook.com/heinkyawswartun)
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျားစာလေးပါ လိုအပ်ရင်တော့ ဒေါင်းသွားကြပေါ့. :D
TZ သတင်းစုံ.apk လေးနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်သူထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး တော်တော်လေးကို စုံစုံလင်လင်ဖြစ်တာတော့ တွေ့ရတယ် မုဘိုင်းနှင့် အပိုပစ္စည်းကဏ္ဍ
ပြည်တွင်းသတင်းကဏ္ဍ ဂျာနယ်များDownload ကဏ္ဍ၊ နည်းပညာကဏ္ဍ၊အားကစားကဏ္ဍ၊ရသ ကဏ္ဍ၊၁၈အောက်မကြည့်ရကဏ္ဍ၊စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းများစွာဖြင့် တန်ဆာဆင်ပေးထားတာတွေရှိရပါတယ်........ကျနော့်ဆိုက်ဒ်လေးတောင် ဒီအထဲမှာပါဝင်နေတာတွေ့မြင်ကြပါမယ်...
Naung Yo Facebook စာမျက်နှာမှ
ဆရာကိုသူရိန်စိုးဖန်တီးထားသော All In One Huawei Root Tool ( 85 MB )
ဆရာကိုသူရိန်စိုးရဲ့All In One Huawei Root Tool ဖြစ်ပါတယ်.. Huawei တွေ အားလုံး Root နိုင်ဖို့ ဒေါင်းယူထားသင့်ပါတယ်.. ဆရာသူရိန်စိုးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Download => Solidfiles / Mediafire
Software ကို Run သည့်အခါ Passwords တောင်းနေလျှင် solar ဟုထည့်ပေးပါ
Viber ကို offline အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် Viber Offline For Android
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဖုန်းမှာ ဗိုင်ဘာ ဆော့ဝဲလ် ရှိရင် အဲ့ ဗိုင်ဘာ က အော်တို အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ရှိနေကြောင်းပြပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ် မှာ (သို့) ဂျီတော့မှာ Offline လုပ်ထားလည်း သင် ဖုန်းနဲ့ သုံးနေတာဆိုရင်တော့ ဗိုင်ဘာဆော့ဝဲလ်ကြောင့် သင် အွန်လိုင်းပေါ် မှာ ရှိကြောင်း တစ်ဖက်က သင့်သူငယ်ချင်းက သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Viber က ကြူကြူတွေ ရန်က ကင်းဝေးအောင် ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ဆောင်ထားပေါ့ဗျာ
အသုံးပြုပုံက ဆော့ဝဲလ် ကို ဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်၍ ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာရင် အောက်နားမှာ Online လို့ ရေးထားတဲ့နေရာကို လက်နဲ့ ဖိပြီး Offline ပြောင်းပေးရုံပါ။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ Software, ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ
အွန်လိုင်းမှာ ဟိုဝင်မွှေဒီမွှေနောက်ရင်း တွေ့ ခဲ့တဲ့
အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တွေ ကို 2011 ဘားကန့် ပွဲမှာ ဝေပေးခဲ့တဲ့ ကိုသီဟအေးကျော်(frozen keyboard ဖန်ဆင်းရှင်) ကိုလဲ ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှီပါကြောင်း။
အွန်လိုင်းမှာ စာအုပ်တွေရှယ်းပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မူရင်းရေးသားသူများကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှီပါတယ်။
ကဲ ဦးဦးတို့ ရေ ကြိတ်လိုက်ကြစို့ :D
Nanda Htoon shared Tsuki No Hikari's photo.
Photo Comment ပါ ပေးလို့ရတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Facebook 8.0.0.0.2 (For Android)
ဒါလေးကတော့ Android ဖုန်းတွေအတွက် Photo Comment ပါ ပေးလို့ရပြီ ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Facebook 8.0.0.0.2 ပါ ..
ကဲဗျာ ဒီနေ့ အခွင့်ကောင်းလေးတစ်ခုရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာစာက ရိုးရိုးမမှန်တာမဟုတ်ဘူး ၀လုံးကြီးမှ အပျောက်ကလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုး ဒီနည်းအတိုင်ဖြေရှင်းပေးလိုက်
အထဲမှာ လုပ်နည်းရော လိုအပ်တဲ့ Softwareတွေရော ပါပြီးသားဗျာ လူကြီးမင်းတို့လဲ အဲလို အခက်ခဲလေးတွေ ရှိနေရင် အောက်မှာ ဒေါင်းသွားကြနော်..
Android Multi Tools v1.02b SD Card ကို Phone Storage လုပ်မယ် ( Root Need )
Android တစ်မားများအတွက် အသုံးတဲ့Tool လေးပါ
Android ဖုန်းတွေ Pattorn lock တွေဖြုတ်လို့ရတယ် Logo ကမှာရက်နေတဲ့
ဖုန်းတွေ hard reset ချလိုရတယ် USB တော့ on ထားရမှာပေါ့
ကျန်တော်တော့တစ်ရုတ် Tablet တစ်လုံး
စမ်းပြီးပါပြီ Logo ကနေကို တက်မလာတော့တာ
5.wipe Data လုပ်လိုက်တာ Tablet reset ကျပြီးပြန်တက်လာတော့
ကောင်းသွားတယ် Firmware တောင်တင်စရာမလိုဘူး Tablet တိုင်း ဖုန်းတိုင်း
ရတယ်လို့တော့ မဆိုဘူးနော် စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် တော့ အောက်မှာဒေါ်င်းသွားလိုက်.။
Credit To Mr.phyoနည်းပညာ
Android 4.0 အထက်တွေမှာ Data သိပ်မသုံးရဘဲ Memory Full ဖြစ်ရင် ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခု
2.3 တွေတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ 4.0 နဲ့ အထက်ဖုန်းတွေကိုင်တဲ့သူတိုင်း ကြုံရမဲ့အဖြစ်ကလေးနဲ့ ဖြေရှင်းရမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြချင်ပါတယ် အဲဒါကတော့ sd ကဒ်ထဲမှာ ကိုယ်က data တွေကို2Gb လောက်ပဲထည့်ထားပေမယ့်4Gb sdကဒ် တစ်ခုလုံးပြည့်လုနီးပါးဖြစ်နေတာ ပြောရရင် dcim folder ထဲက .thumbnail folder ဖိုင်ဆိုဒ်တအားကြီးလာတာကိုပြောတာပါ အများအားဖြင့်တော့ photo, video တွေအထည့်မျာ gallery အကြည့်များတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဆိုရင် 16 Gb sd ကဒ်ကိုသုံးပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေကို စဖို့နောက်ဖို့ photo coment တွေက ပုံပေါင်း 1000 ကျော်လောက် ဒေါင်းထားတဲ့ video တွေက 300 လောက်ဆိုတော့ data တွေက စုစုပေါင်6းGb လောက်သုံးထားတယ် ခင်ဗျ ဖုန်းကိုသုံးပြီးလို့ နာရီပိုင်းလောက် ကြာလို့ storage ကိုကြည့်လိုက်ရင် ပြည့်လုလုဖြစ်ပြီး အပိုက 8Gb လောက်ဖြစ်သွားတယ် အဲဒါနဲ့ thumb တွေကိုရှာဖျက် ပြီးပြန်တက်နဲ့ သံသရာလည်နေတော့ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး android forum တွေလိုက်မွှေတော့ ကိုယ်လိုလူတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဗျ နည်းလမ်းကလည်းအစုံဗျ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က nomedia folder ဆောက်ဆိုလို့စမ်းကြည့်တယ် မရဘူး တစ်ယောက်က nomedia က folder မလုပ်ရဘူး file အသစ်တောင်းပြီး name ပြောင်းပေးရမှာဆိုလို့ လုပ်ကြည့်လဲ မရ ပြန်ပြီး တက်တာပဲ နောက်ဆုံးတော့ အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးတွေ့တယ်ဗျ အဲ့ဒါကတော့ root explorer နောက်ဆုံး ဘားရှင်းလေးကိုသုံးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့နည်းပါ ပထမဆုံး setting > manange app> all tab ကိုသွားပြီး gallery နဲ့ media storage app နှစ်ခု ကို clear data နဲ့ force stop လုပ်ပေးပြီး ဖုန်းကို reboot ချပါ ပြန်တက်လာရင် rootexplorer apk ကနေ sd card > dcim> .thumbnail folder ထဲဝင်ပါ အဲ့ထဲမှာ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ thumbnail တစ်ဖိုင်ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖိုင် (အများအားဖြင့် .thumbdata3-19672902099) နဲ့ ပုံလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲဒီ thumb ဖိုင်လေးရဲ့ name ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာကူးရေးထားပါ ဒါမှမဟုတ် ဖိထားပြီး rename နှိပ်လိုက်ပြီး name ကို copy ယူထားပါ ပြီးရင် ဖိုဒါထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေအကုန်ဖျက်ပါ ဖျက်ပြီးမှ rootexplorer ရဲ့အောက်ခြေက အပေါင်းသင်္ကေတလေး ကိုနှိပ်ပြီး file ကိုရွေးပါ ခုနက မှတ်ခဲ့တဲ့ name ကိုပေးပါ အဲဒါဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ thumb ဖိုင်လေးနဲ့ အစားထိုးပြီးဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် ဖုန်းကို reboot ချ လိုက်ပါ gallery ထဲဝင်ကြည့်ပါ ပုံတွေကိုစစ်ကြည့်ပါ မပေါ်သေးရင်စောင့်ရပါမယ် တခါတလေ တော်တော်ကြာတတ်တယ် data အနည်းအများပေါ်မူတည်ပါတယ် storage ကိုလည်းစစ်ထားပါ ပြီးရင်ဖုန်းကိုပုံမှန်သုံးလို့ရပါပြီ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူ့ဟာသူ တက်တဲ့ thumb ဖိုင်နေရာမှာ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တဲ့ thumb ဖိုင်ကိုအစားထိုးလိုက်တာပါ အဲဒါကတော့ android forum ရှာပြီးကျွန်တော် သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးကိုဝေမျှလိုက်တာပါ အဆင်မပြေသူများရှိရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး
Credit to : Ko Phan
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ, နည်းပညာ ဗဟုသုတ
ဒီbat လေးကျတော့်တွက်တော့်တော်ခေါင်းစားသွားတယ်...hee hee
ဒါသုံးဖို့wireless adapter လိုသေးတယ်နော်
desktop မှာတော့လိုဒယ် ချိတ်နည်းကတော့တားတားလည်းတိဝူးးလက်တော့ပဲကိုင်တာခိခိ
ကျတော်တို့ဖုန်းကနေwifi တွေအပြင်ကိုသူများသုံးနိုင်အောင် hotspot လေးတွေလွှင့်ကြတယ်နော်အခုက ကွန်ပျူတာကနေလွင့်မှာပါ
bat file လေးမသုံးခင် အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ အဓိက အရေကြီးတဲ့command လေးကိုပြောပြပါမယ်
အရင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက wifi hotsopt name နဲ့ password ကိုအရင်သတ်မှတ်ပေး၇ပါမယ်
cmd ကိုဖွင့်ပါ(press window key+R and then type cmd and press enter)
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=yourname key=password
your name ဆိုတဲ့နေရာမှာ hotspot နာမ်မည်ထည့်ပြီး password နေရာမှာ password ထည့်ပေးပါ(၈လုံးကျော်ပါစေနော်)
ကျတော်ရေးထားတဲ့ bat ကအထက်က သုံးခုကိုအခြေခံရေးထားတာပါခင်ဗျာ
အရင်ဆုံးwindow key+R တွဲနိပ်ပါ runbox ကျလာရင် notepad လို့ရိုက်ထည့်ပါ
ctrl +S>file name မှာ hotspot.bat လို့ပေးပါ
save as type မှာall file ကိုရွေးပေးပါ
desktop ပေါ်မှာပဲ Save ပေးပါ
အရင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက user naem နဲ့ password သတ်မှတ်ဖို့A လို့ရိုက်ပြီးအန်းတားခေါက်လိုက်ပါ(A အကြီးစာလုံးနော်)
password က အနည်းဆုံး၈လုံးမှရပါမယ်
ကျတော့်ဆိုဒ်လည်းကျလာပါမယ် message box တစ်ခုလည်းထွက်လာပါမယ်
တကယ်လို့သူငယ်ချင်းက B လို့ရိုက်ပြီးအန်းတားခေါက်ရင်
user name နဲ့ password သတ်မှတ်ပြီးသားလွင့်သွားမှာပါ
ဥဥ ကိုကိုတို့ code တွေနားလည်ရင် ပြန်ပြင်ပြီးကြိုက်သလိုပြန်ရှဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
code ကူးတဲ့အခါသတိထားပါ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်ကျမှ
title Wifi Hotspot tool for window(Yat Sauk Tar Lay)
echo Wifi Hotspot tool For window(Yat Sauk Tar Lay)
echo If you want to set hotspot name and password.
echo Type A and press enter.
echo IF you want to hotspot from your computer,Type B and press enter.
echo If you want to stop hotspot network,type C and press enter.
set /p YST=Type you want:
if %YST%==A goto :A
if %YST%==B goto :B
if %YST%==C goto :C
echo Please type A and press enter
set /p myothantkyaw=Enter your hotspot name:
set /p myothantkyawPassword=Enter your hotspot password(more than 8 character):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=%myothantkyaw% key=%myothantkyawPassword%
msg * Host Name=%myothantkyaw% ,Password=%myothantkyawPassword%.Thank for using this
posted by ရပ်စောက် သား